Diyaaradda Lacagta Sidday oo joogta Garoonka Muqdisho
Wararka ka imanaya magaalada Muqdishu ayaa sheegaya in hay'adaha amniga Soomaaliya ay qabteen boorsooyin la aamisan yahay inay ku jiraan lacago ay sidday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta.
Dhinaca kale safiirka imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Axmed Al-Xamaadi oo ay la hadashay VOA qaybta Soomaaliga ayaa beeniyey in lacagtaasi ay u socotay safaaradda, waxaana uu sheegay in lacagtaasi ay ahayd mid loogu talogalay mushaharaadka ciidanka.
Waxa uu VOA u sheegay in madaxda Soomaalidu aay ogaayeen, sidoo kale waxa uu beeniyey warar sheegaya in horay loogu sii sheegay dawladdiisa inaysan Soomaaliya keenin lacag.
Xiriirka dowladda Soomaliya iyo Imaaraatka ayaa aad u liitay wixi ka danbeeyay go'aankii baarlamaanka federaalka uu Shirkada DP world uga mamnuucay dhamaan heshiisyadi ay Soomaaliya ku gashay.
Dhageyso Lacagta la Qabtay